नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार्न पुल कि पर्खाल?
५ बैशाख - व्यापकताका लागि पुल हालिन्छ, खुम्चिनका लागि पर्खाल लगाइन्छ। अवैध मानिसको प्रवेशले बोझ बढ्न थालेपछि मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तो सनक हाम्रोमा नदेखिएला। नेपाल एक्लैले तीनतिरबाट सीमामा पर्खाल लगाउन संभव नहुन पनि सक्छ। तर सीमा मिच्नु कसैका लागि पनि फाइदाजनक...
बच्चाको स्कुल फेर्नुअघि सोच्ने कि!
३ बैशाख - विद्यालय फेर्ने निर्णय आफ्नो हो कि बच्चाको आवश्यकता हो सो बारेमा परिवारमा खुला छलफल हुन जरुरी छ। अभिभावकले पहिले पढ्दै गरेको विद्यालयमा बच्चालाई मनपरेका कुराहरु के के छन्, जान्न जरूरी हुन्छ। उसले चित्त नबुझाएका कुराहरू अथवा उसलाई मन नपर्ने कुरा तथा व्यवहार छन् भने त्यसको बारेमा पनि जानकार...
२४ चैत - केही दिन अगाडि हिसिला यमिले सडकमा लगाएको नारालाई लिएर सामाजिक सन्जालमा ‘राष्ट्रवाद’को पहिरै चलेको छ। फेसबुक–ट्वीटरमा देश बचाउन मानिसहरू लामबद्ध उभिए, त्यसमा पनि ‘बौद्धिक’ मानिएकैहरू। कतिपय फेसबुक टिप्पणी यति घीनलाग्दा र यति हीनतर छन्, तिनले कुनै पनि सभ्य मानिसको रौँ–रौँ उठ्छन्।
रेल कुदाऊ तर निकुञ्ज जोगाऊ
१६ चैत - रेलमार्गको कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज मानिसहरुको प्रवेश सहज हुने देखिन्छ, जसले गर्दा लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षणमा अझ चुनौती थपिनेछ। निर्माणको बेला बनाइने अस्थाइ टहरा, निर्माण सामग्री, दोकान, फोहोर, टुटेफुटेका उपकरण, आदिलाई हटाउन गाह्रो छ। बिल्डर्सहरुबाट साइटमा दैनिक निस्कने फोहोरबाट नदीको स्रोत...
फर्केर हेर्दा ती दुई साहित्य उत्सव
१५ चैत - यो वर्ष अलि अनौठै तरिकाले देशमा आयोजना हुने दुई चर्चित साहित्य महोत्सवमा भाग लिन पुगियो। सामाजिक सञ्जालमा नेपाल साहित्य महोत्सवले मागेको सुझावमा ईतिशाले दिएका नामहरूमा आफ्नो र चौकठ सञ्जाल पर्नु, त्यही क्रममा ऋचासँग चौकठले के गर्न सक्छ-सक्दैन विषयमा छलफल हुँदै जाँदा पोखरामा भएको ३ दिने नेपाल...
राजकुमार ह्यारीले मंगली तामाङ सम्झँदा
१५ चैत - कार्यक्रममा ह्यारीले नेपाल भ्रमणका दिन सम्झदैँ भविष्यमा पुनः नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा प्रकट गरे। उनले गोरखाको गाउँमा जसको घरमा बास बसे, उनको नामै लिएर प्रशंसा गरे। ‘म मंगली तामाङको आतिथ्य र स्वागत त जीवनमा कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ,’ उनले भने।
प्रश्न गर्ने परिवेश खोई?
१४ चैत - साना नानीहरूसँग अनेक प्रश्न हुन्छन्। जसै उमेर बढ्दै जान्छ, प्रश्नहरू उब्जिन छोड्छन्। बाल्यकालमा भए जस्ता जिज्ञासा र प्रश्नहरू वयस्क हुँदै गर्दा सकिँदै जाने हुन्? सायद त्यस्तो होइन। तर, हाम्रो हुर्काइ र हाम्रो शिक्षण विधिले हामीलाई प्रश्न उब्जाउने र समाधान खोज्ने लेठोबाट मुक्त गरेर फटाफट रेडिमेड...
११ चैत - हिजोआज नेपालका हरेक घरका नजिक वा टाढाका सदस्य विदेशिनु अकाट्य सत्य बनेको छ। तीमध्ये खाडी मुलुक जानेको संख्या बढी भएको कुरा पनि अर्को यथार्थ हो। समाजमा पछिल्लो पटक यही ‘सत्य’ बन्न अग्रसर विकराल समस्याको प्रतिनिधि कथा समेटिएको प्रचारसहित बजारमा निस्किएको हो ‘मुदिर’।
सहरमा एक पुँजीवादः काँठमा एक रामचन्द्रे
७ चैत - मिश्र सरको पुँजीवादबाट पीडित साक्ष्य हो रामचन्द्रे। उसलाई सिंहदरबारको कुनामा थन्किएको राज्यले नजर लगाउँदैन। उसको आहत कसैलाई सुन्ने फुर्सद छैन। महँगीले हजारपल्ट उसमाथि घन बर्साउँछ। जन्मेपछि बाध्यतावश बाँच्नै पर्ने नियतिअनुसार ऊ साँझबिहान घाइतेझैँ घिस्रिरहन्छ।
मेरो समयको एसएलसी र आजको एसइई
६ चैत - एकाबिहानै फेसबुक खोलेर हेर्दा थाहा पाएँ, यो सालको एसएलसी सुरु भइसकेछ। आजभोलि त एसएलसीलाई ‘एसइइ’ पो भन्दा रहेछन्। सबै भन्छन्– यो परीक्षा जीवनको फलामे ढोका हो। यो पार गरेमा जीवनमा सफलताको बाटो खुल्छ।
५ चैत - राजनीति गर्छु भन्नेहरूले ति एजेण्डाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरी सुख छैन। अहिले भएका वा भविष्यमा बन्ने सबै राजनीतिक दलले आफ्नो विशिष्टता प्रमाणित गर्ने तिनै एजेण्डामा टेकेर हो। “एजेण्डा-सेजेण्डाको कुरा छोडौँ, विकासको कुरा गरौँ” भन्ने तर्क एउटा एनजिओका लागि सुहाउला, राजनीतिक दल भनेको...
खस्कँदो छ उद्योग वाणिज्य महासंघको साख
२ चैत - विस्तारै हटिरहेको लोडसेडिङ, उद्योगी र मजदुरबीचको सुमधुर सम्बन्ध र विदेशी लगानी बढिरहेको अवस्थामा अबको नेतृत्वले मुलुकमा लगानीको वातावरण रहेको अन्तराष्ट्रिय सन्देश दिन सक्नुपर्छ। नेतृत्व भन्नाले महासंघमा अब अध्यक्ष मात्र होइन पूरै टोली नै हो। त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्षसँगै तीन उपाध्यक्ष र त्यसमा पनि...
यस्ता छन् एक लेस्वियन जोडीका दुःखसुख
१ चैत - नेपाली तेस्रो लिङ्गी अञ्जली तामाङको चर्चा काठमाडौँदेखि न्युयोर्कका पत्रपत्रिकासम्म पुग्दा मलाई पनि केही समयअगाडि बिबिसी साझा सवालमा आएका तेस्रो लिङ्गीहरूको सम्झना भइरहेको थियो। उनीहरूले सामाजिक बहिष्कारको सामना त गर्नैपर्छ, त्यसमा पनि जीविकोपार्जनको समस्या झन् ठूलो छ।
३० फागुन - स्वदेशी बर्दीधारीले सप्तरीमा र विदेशी बर्दीधारीले कञ्चनपुरमा होली आउनु केही दिनअघि नै खूनको होली खेलिदिएर तराई–मधेशको यो सालको होली फिका, निरव, खल्लो र निस्तेज तुल्याइदिए। जसका निम्ति रंगिन, संगीतमय, स्वादिलो र तेजिलो पर्व हो होली, उनीहरू बरखी बारेको मान्छेको मनोदशामा छन्। बर्दीधारी त के हो र?...
अमेरिकामा नेपाली मौलिकता जोखिममा
२९ फागुन - एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्दा मानिसले आफूसँगै आफ्नो मौलिक सँस्कृति बोकेर हिँडेको हुन्छ। त्यसरी आफूसँग भएको संस्कृति अर्को नयाँ ठाउँमा पुग्दा खतरामा पर्ने गर्छ। आफ्नो मौलिकतालाई जोगाउन खोज्दाखोज्दै पनि नयाँ परिवेशले त्यसलाई प्रभाव पार्छ। अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको मौलिकतामा पनि त्यस्तै...
८ फागुन - एक पात्र जो टन्टलापुर घाममा आफू र आफ्ना बालखाका लागि खोला किनारमा गिटी कुट्दै छ। उसको त्यो कथालाई हामी वास्तविक जीवनमा सुन्न त्यति महत्व दिँदैनौ होला, जति त्यो कथा रङ्गीन पर्दामा उतार्दा दिन्छौं। एक पात्र जो बिहानदेखि बेलुकासम्म घरको काममा नै व्यस्त छ, आफना परिवारजनलाई खुसी राख्नमा व्यस्त छ,...
३ फागुन - कीर्तिपुरमा पढ्न आउँदा म विवाहित र एक बच्चाकी आमासमेत बनिसकेकी थिएँ। मेरा साथीहरू २६ कटेका छन् सबै। खासै कोही प्रेमको कुरा गर्दैनन्। २५ वर्ष पुग्दा पनि प्रेममा नपरेको कुरा गर्ने। पोहोर यति बेला देखि गाउँ गाउँ डुल्ने काम पर्यो। विषय थियो, ‘बाल बिवाह। एक जना बहिनी थिइन्, १३ वर्षमा भागेर बिहे गरेको...
३ फागुन - प्रेम गर्यो त गर्यो सकियो। मैले त प्रेम गर्न सकें त्यो नै मेरो सफलता हो। एउटा सफल प्रेम मैले बाँचें । बस्, प्रेमको सफलताको मापदण्ड प्रेम नै हो। फेरि मेरो जीवनमा अर्को प्रेम घटित भयो। त्यो पनि मेरो पुँजी हो। कसैको जीवनमा एउटा, दुइवटा, कसैको दुईमात्र होइन, तीन ओटा प्रेमपछि ब्रेक लाग्ला। त्यसलाई...
युवा–विद्यार्थी केन्द्रित साहित्योत्सव
२ फागुन - काँकरभिट्टामा यही फागुन १२ गतेदेखि आयोजना हुन लागेको तीन दिने कला साहित्य उत्सव विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूका उपयोगी हुनेछ। साधारणतया साहित्यिक महोत्सवहरू साहित्यकारका लागि मात्र आयोजना गरिने बुझाइ छ। तर, रिडर्स झापाले गर्दै आएको कला साहित्य उत्सव भने साहित्यबाहेक अन्य क्षेत्रका मानिस र...
ध्वनि प्रदुषणको चपेटामा बिचरा बिरामी!
२४ माघ - केही महिनाअघिसम्म स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने धुम्बाराही चोकैको एउटा भवनमा ‘अनमोल अस्पताल’ सञ्चालनमा थियो। सोही भवनको आधा भागमाचाहिँ ‘भिबोर होटल’ चलाइएको थियो। सोही अस्पतालको माथिल्लो तल्लामा मध्यरातसम्म मस्ति गर्ने डान्स रेष्टुरेन्ट चल्थ्यो। एउटै भवनमा रहेर यी तीनथरी...
कर्णाली-भेरी खोला, फेरि भेट होला-नहोला
२१ माघ - ‘हाम्रा बज्या भेडा पाल्दा खन्, हामी पनि भेडो पाल्न्या हुम्।’ यति भनिसकेर फुच्चेले एकपटक सुँक्क गर्यो, नाकको भेडोको लम्बाई घट्यो। मैले क्यामेरा झिकेँ र उसलाई कैद गरेँ, उसको ओठ छलेर निस्केका दाँत, नाकको भेडो, उसको कमिजको टाटो, जाँगेको तुना, मुत्नेभन्दा अलिक तल उध्रेको सबथोक कैद भयो।
१८ माघ - आइतबार कमरेड केपी ओली र कविवर माधव घिमिरेका जोरबाहुलीबाट माइतीघर मण्डलामा ‘१० मिटर अग्लो र ७ मिटर लामो’ नेपालको झण्डा फहराइयो। मिडियामा ‘सबैभन्दा ठूलो’ झण्डाको चर्चा पनि भयो। तर विगत एक–डेढ वर्षयता चलेको ओली–घिमिरे दोस्तीको भने खासै उल्लेख भएन। आइतबारको झण्डोत्तोलन त्यो दोस्तीको पछिल्लो कडी...
अरबबाट फर्केका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
१६ माघ - नेपाल फर्केलगत्तै विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूको बिमा रकममा वृद्धि पनि गर्नुभयो तपाईंले। हेर्दा लाग्छ, विदेशिएका नेपालीको मर्म युएइ भ्रमणमा तपाईंले राम्ररी बुझ्नुभयो। धेरैले तपाईंको निर्णयको स्वागत गरे र केही आलोचनाका स्वर पनि सुनिए। तर समाधान त्यो मात्रै होइन, विदेशिएका कामदारको बिमा रकम...
११ माघ - कसैले ‘हैन समाजका खराव व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नमानौँ। तिनको हदैसम्मको विरोध गरौँ तर समाजको पर्याय तिनीहरु होइनन्। ती त धब्बा हुन्’ भनोस् न मात्र प्रतिआक्रमण सुरु भैहाल्छ। अपवादलाई समाज भन्ने, समाज खराबै खराबले भरिएको छ। सर यसो भन्छन् भनेर चैतन्य सरलाई गुनासो गर्यो भने भन्नुहुन्छ ‘छोड्दिनुस त्यस्ता...
लोकमान बहिर्गमनको हर्षबढाइँपछि ...
६ माघ - जुन देशमा नायक नै छैनन्, त्यो देशमा कोही कसरी महानायक कहलाउँछ? म न, विपी कोइरालालाई ‘महामानव’ भनेको बुझ्छु, न राजेश हमाललाई ‘महानायक’। रेखा थापालाई ‘नम्बर १ नायिका’ भन्दा मलाई गर्व होइन, अप्ठयारो लाग्छ।
२८ पुस - बुवा पहिले कुक र सेफको रुपमा काम गर्नुहुन्थ्यो। तत्कालिन रोयल होटेलबाट वेटरको हैसियतमा काम सुरु गर्दै उहाँले कुकको रुपमा होटेल शङ्कर, होटेल ग्रीन, होटेल तारागाउ (अहिलेको हायात), गोकर्ण सफारी पार्क देखी होटेल अन्नपूर्णमा पनि काम गर्नु भयो।
२४ पुस - पारिलो घाममा अशोकले सुनाए घामजस्तै उज्याला सपना ‘नाला पुरिएको, ठाँउठाँउमा डस्टबिन राखिएको। रुख बिरुवा रोपेको, फूलहरू फुलेको। के भनुँ अरु। जो आँउछ मेरो वीरगन्जमा ऊ बढिया फिल गरोस् फर्केर गएपछि र फर्कीफर्की आइरहोस् मेरो ठाँउमा।’
विन्दु परियार थापा
१५ पुस - मेरो बाल्यकालमा दलित हुनुको विभेद अनुभव भएन। दौंतरीहरुले मलाई दलित भनेर कहिल्यै विभेद गरेनन्। डुल्दा, खेल्दा, खाँदा जुनैबेला पनि समान रुपमा आत्मीयता थियो दौंतरीमाझ। तर यो बाल्यकालको आत्मीयता वयस्क हुँदै गएपछि तोडिंदै गयो। जब मैले अन्तरजातीय विवाह गरें, तब मैले अनेकन विभेद भोग्न थालें।
८ पुस - म लत्याकलुतुक गलें। हराएको पुस्तक सकुशल उद्वार गर्नेे झिनो आशा पनि बाँकी रहेन। अब, एउटै विकल्प रह्यो, नयाँ पुस्तक किन्ने। यसबाट सहज रुपमा पुस्तकको समस्य त हल हुन्थ्यो तर, त्यसमा सम्वन्धित लेखकको हस्ताक्षर कहाँबाट ल्याउने?
७ पुस - टिनले छाएका टिनकै टहरा अगाडि पुसको चिसोले थला परेका बूढाबूढीका खाक्कखुक्क ‘ताल नमिलेको ढिमे बाजा’जस्तो सुनिन्थ्यो। तैपनि ती भूकम्पपीडित जेष्ठ नागरिकले, खोकीको तालमै सही, घाम तापिरहेका थिए। हुन पनि तिनले भक्तपुर च्याम्बासिंहस्थित गरुँडकुण्डमा झरेको घाम सङालेर रातसँगै चिसिने चिसोसित रातभर लडाइँ...